कछुवा गतिमा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना
दश वर्षको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत
२०७७ पौष, १
पुस १, दाङ । दाङको देउखुरीमा सञ्चालन भइरहेको बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । करीब १० वर्ष पहिले शुरू भएको उक्त सिँचाइ आयोजनाको काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
राप्ती नदीको पानीलाई देउखुरीको दक्षिणी भू–भागमा लिएर त्यहाँको झण्डै ४ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले उक्त आयोजाना निर्माण शुरू गरिएको थियो । तर कामले तीव्रता पाउन नसक्दा आफ्नो जग्गामा सिँचाइ गर्ने किसानको आशा धमिलो बन्दै गएको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न रू. ४ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म रू. १ अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको छ । ३० किलोमिटर मुल नहर र १६ ओटा शाखा नहर निर्माण गर्ने योजना भएको छ । तर, अहिलेसम्म करीब सात किलोमिटर मूल नहर मात्रै सम्पन्न भएको छ । मूल नहर बनाउनुपर्ने जम्मा १४ किलोमिटर रहेको र सात किलोमिटर नहर सम्पन्न भइसकेको र बाँकी सात किलोमिटर नहरको पनि काम टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको प्रगन्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीले जानकारी दिए ।
‘मूल नहर निर्माणको आधा काम सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी आधा काम पनि प्रक्रियामा गइसकेकाले अबको २ वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने ।
मूल नहरबाट करीब १४ किलोमिटर नहरको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै किसानको खेतबारीमा पानी पुग्छ । त्यहाँबाट मात्रै शाखा नहरहरू निर्माण गर्दै किसानको खेतखेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाको मुख्य मुहान अर्घाखाँचीको जलुके सापमारास्थित राप्ती नदीको किनारामा रहेको छ ।
आयोजनाको मूल नहर अर्थात् १४ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि करीब ५९० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा पनि कामले तीव्रता नपाएको हो । बड्कापथ आयोजनाका लागि वर्षेनि सरकारले १० करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यस वर्ष २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
उक्त सिँचाइ आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब २९ करोडको ठेक्का भएको कार्कीले बताए । आयोजनाको काम सुस्त हुनको मुख्य कारण बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भएका ठाउँका स्थानीयलाई मुआब्जा दिने कार्यक्रम नै नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा समय लागेको र वन क्षेत्रमा काम गर्दा आउने समस्या पनि आयोजनामा ढिलाइको सहायक कारण रहेको उनले बताए । आयोजनाको काम शुरू भएको लामो समय बित्तिसक्दा आशा गरेजति काम हुन नसकेको गुनासो स्थानीय शोभाराम यादवले गरे ।
दाङमा १ वर्षमा २ हजार उद्योग थपिए[२०७८ सावन, १४]
आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै बंगलाचुली पार्क[२०७८ सावन, १०]
बंगलाचुली पार्कतर्फ आन्तरिक पर्यटनको आकर्षण बढ्दै[२०७८ सावन, ४]
सेवा विस्तार गर्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान[२०७८ जेठ, १७]
अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि बरण्डाको भूइँमै राखेर करोना संक्रमितको उपचार [२०७८ बैशाख, १८]
रोल्पाका १४ खोलामा पक्की पुल बन्दै[२०७८ मंसिर, २१]
लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधारको काम धमाधम[२०७८ मंसिर, २०]
दाङका ६ ओटा पालिकामा भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन शुरु[२०७८ मंसिर, १९]
भक्तपुरका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यसेवा केन्द्र[२०७८ मंसिर, १७]
अत्याधुनिक प्रविधियुक्त शीतगृह निर्माण शुरू[२०७८ मंसिर, १७]